I-24 ehambelana neT Tattoos Design Idea Kwabesilisa nabasetyhini - Tattoos Art Ideas
I-24 ehambelana neT Tattoos Design Idea Kwabesilisa nabasetyhini
sonitattoo Novemba 23, 2016
Xa ucinga malunga nokuba ufumana itekisi ehambelanayo, kukho izinto ozimele uziqwalasele ngaphambi kokuba ungenise. Uhlobo loyilo oluyidingayo kunye nendlela ofuna ukuba itekisi ibekwe ngayo ezinye zezinto ofuna ukuziqwalasela kuqala.
1. Ukuqhathaniswa kweT Tattoos edibeneyo kubantu abatshatileyo
Unokufumana i tattoo # ekufutshane nabangani kunye namalungu entsapho. Ubuhle be tattoo efana nendlela abajonga ngayo xa ubona emzimbeni. Unako kwakhona ukubekwa kuyo nayiphi na inxalenye yomzimba wakho.
3. I tattoo ekhangayo
Abasetyhini banokuthi bafumane le tattoo efanayo. Kwabayeni kunye nabafazi banakho ukufana nale #tattoo ukuze bajonge bhetele kwaye baxhamle bhetele.
4. Okumangalisayo okufanisa tattoo
Oodade banethuba elihle xa benamathandle afana neentlobo ezimangalisayo. Ukuba uyazibuza i-#design ukuze wenze tattoo yakho ekhethekileyo iphume umthandi.
5. I tattoo enkulu
Into ephambili enokuyifumanisa ukuba le yinto yokuqala yokubonisa itekisi yinto enhle ngayo.
6. I tattoo efana
7. I tattoo efanelekileyo
Kwabanye abantu, bahlala bekhangela into engaqhelekanga eya kubancedisa ukuba banamathele ngakumbi. Kwakhona, itekisi ehambelana nayo iya kubancedisa ukuma phakathi kwesihlwele xa kubonwa ndawonye.
8. Ezikhethekileyo ezifanisa tattoo
Abantu abambalwa banokukhumbula iziganeko ezifanelanayo xa belahlekelwe ngumntu obenomdla obalulekileyo ebomini babo. Abanye abantu bangakhuthaza iimpawu zokufanisa ukukhumbula ixesha elithile ebomini babo.
9. Ukutshatyalaliswa kokutshatyalaliswa kwe tattoo
Kukho amaxesha apho sifuna ukuthobela ngakumbi. Xa sine tattoo ehambelanayo enjengeli, wonke umntu ufuna ukusibheka. Lobu buhle bokuba ne tattoos eziphambili
10. Umbala ogqithisileyo we tattoo
I tattoo efana nemibala efana nale ithetha ukuba unamehlo ecacileyo ngezinto ezilungileyo. Njenge-fashionista, akukho nto ivakalelwa ngokufanelekileyo njengokuba ne tattoo efanayo.
11. I tattoo efanayo
12. Chic efana ne tattoo
Uza kubona wonke umntu ekhangeleka xa unayo tattoo efana neyokuncedisa ukuba uphume kwindawo nayiphi na indawo. Uyilo luyingqayizivele kwaye yonke into ebhalwe kuloo tattoo ipholile. Ucinga ukuba kunjalo?
13. I tattoo efanelekileyo
Kubantu abambalwa, abanakho inkcazelo ekhoyo kwisitoreji. Baye le ngcamango eentloko zabo ukuba izibhengezo ze tattoo zizitolo ezincinci ezivumela iilori kunye nama-bikers kwindawo yabo. Nangona kunjalo, ngale tattoo elula, uqonda ukuba kuthetha ukuthini umdlalo omkhulu.
14. I tattoo ekhangayo
Ngaba ubonile abantu abanalo hlobo lwe tattoo? Xa ufuna ukukhangela i-chic nge tattoo, uya kukhangela idizayini enhle njengale. Esi sizathu sokuba kutheni abantu abaninzi basebenzisa le tattoo.
15. I tattoo ephezulu
Inyaniso yembandela kukuba iimeko zihlukile. Abantu abavela kuzo zonke iintlobo zemvelaphi eyahlukileyo bafumana iitotto ezifana nale nto ukuze ibe ngcono. Nangona ungabambisene nabo, usenokufumana le tattoo ebonwa yilowo nalowo, itekisi efana.
16. Abahlobo abalinganisa tatto
Abantu abambalwa baye bahamba ngeet tattoo kwaye baye babona abantu abangootitshala, ama-cops kunye nabanakekeli bezonyango abafumana inkatha. Nangona kunjalo, xa bebona tattoos ezifanayo, balungele ukuzama ukufumana inkinki ngombala ohambelanayo.
17. Inkxaso efana ne tattoo
Ngaba uyithandile le tattoo kwiinkoliso ezininzi ozivakatye? Ukutshatyalaliswa kwe tattoo kuye kwaba ngumbono ngenxa yendlela abaculi abaqinisekisa ngayo ukuba zonke i tattoo ezifanayo zibukeka zihlukile kwaye zipholile.
18. Ukuqhathaniswa okufana ne tattoo
19. Umgca ofana ne tattoo
Ukufumana itekisi ehambelanayo akuvumelekanga. Ngexesha elidlulileyo, abantu abaye bahlaselwa ngumqeshi kuba babenamathambo, nangona kunjalo akunjalo. Nangona kunjalo, iifotto ezifananisiweyo ziye zaba enye yezona tattoos ezithandekayo.
20. Ikati efana ne tattoo
Imibutho embalwa inokufuna ukuba uyikhusele, kodwa ngokuqinisekileyo abayi kuhlaselwa emsebenzini ekubeni unobumba. Abaphathi abambalwa abayi kuzisa umbuzo kwiintlanganiso. Ukuba unolu hlobo lwe tattoo olufanayo, luyakutyalwa.
21. Umnxeba we tattoo
Ukuba ucinga ukufumana tattoo kodwa awuqinisekanga oko kugcinwe kwisitolo se tattoo, ngoko ufanele usebenze phambili ukuze ufumane yonke idatha oyifunayo. Ukuqhathaniswa kwamathambo kunamanye ama-tattoos amahle kakhulu kunye anokudibanisa onokuyisebenzisa.
22. Iintyatyambo ezifanisa tatto
23. I tattoo elula
24. I tattoo encinane
tattoos zohlangaIndlovu yeendlovuizifuba zesifubatatna tattooi-tattoostattoos kubantuzengalo zengaloizigulaneutywala tattootattooIintyatyambo zeTattooIintliziyo zeTattoostattoobathanda i tattoostattoos zelangaTattoos zeJometritattoo yedayimanitatto tattoosngesandlai-cherry ityatyambotattoiidotiicompass tattootattoo yamehlongombonozinyonizomculo tattoostattoos zenyangai tattoosibinitattoostattoostattoostatto flower flowerizithunywa zezulucute tattoosiipattoosiifotto zentamoowona mhlobo womhlobotattoo engapheliyodesign mehnditattoosiifatyambo zeentyatyamboukutshiza amathamboihoi fish tattooiimpawu zezodiac zempawuiifoto eziphakamileyotattoos ezinyawotattoos kumantombazanaI-Ankle Tattoos